डीभी परेर वडाध्यक्ष अमेरिकामा, अब के हुन्छ ? | NepalDut
डीभी परेर वडाध्यक्ष अमेरिकामा, अब के हुन्छ ?
यसबारे विधेयक तयार गरेर १३ जेठ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । ‘ग्लोबलाइजेसनको युगमा यस्ता कुरालाई रोकेर हुन्छ ?’, प्रतिपक्षले सरकारसमक्ष आक्रोश पोखेको थियो ।
‘हामी राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छौं कि हुँदैनौं ? परिवर्तन चाहन्छौं कि चाहँदैनौं ? हाम्रो प्रशासन सुधार हुन्छ कि हुँदैन ? राष्ट्रप्रति गौरवान्वित र जनताप्रति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुन्छौं कि हुँदैनौं’, डीभीबारे चर्चित मन्त्री लालबाबु पण्डितले भनेका थिए ।
पोखरा १७ मा साढे २७ लाखको राहत बाँडियो